Forum serasera malagasy Ny fiheveran-dison'i Darwin, fizaràna fahenina - Dinika forum.serasera.org
Ny fiheveran-dison'i Darwin, fizaràna fahenina
Fitohizan'ny hafatra : Ny fiheveran-dison'i Darwin, fizaràna fahenina
Nehemiah - 13/05/2013 08:40
Eo izany isika dia handinika ny momba ny vokatra ratsy sy mitondra faisana indrindra @ darwinisme ara-piaraha-monina : ny génocide.
@'izao fotoana politiquement correct izao, lazaina fa "les personnes font l'histoire", fa tsy marina izao. "Les personnalités font l'histoire" no tena marina. Hevitra no entiny anaovana an'izay, hevitra hitaomana na hamotsipotsihana ny saim-bahoaka. Ka ny mpahaihevitra (idéologues) no mamorona ny hevitra. Ka izay no ilazako aminareo marimarina tokoa fa i Charles Darwin no anisan'ny mpahaihevitre lehibe indrindra t@ tantaran'ny olombelona.
Niaiky i Adolf Hitler fa tena nanana influence t@ i Darwin, fa inona kosa no bokiny nankafiziny indrindra, no "Baiboliny" ? Ilay boky nosoratan'i Madison Grant mitondra ny lohateny hoe : "the Passing of the Great Race" (1916). Mazava ho azy moa fa ny fokom-pirenena germanique no "race" resahany eo. Milaza ny boky fa tsy maintsy mandresy @ Ady Lehibe Voalohany ny tafika Alemana, satria manana ny tafika sy ny inzeniera ary ny manam-pahaizana tsara indrindra izy ireo.
Nefa moa rehefa resy t@ 1918 ry zareo Alemà dia tsy maintsy nitady fanazavàna i Grant. Izao ilay izy : tsy naharesy ny Alemà na dia nanana ny tafika faha-2 goavana indrindra (11 000 000 olona) aorian'ny tafika Rosiana dia satria tsy ampy ny mpiady vazaha tena izy, izany hoe ny lehilahy lava be mavo volo sy manga maso, ny vahoaka alemana, satria ringana t@ Ady 30 taona (1618-1648) nifandrapahan'ny Katôlika sy ny Protestanta ny ankamaroany.
Ay marina, saika nadinoko, izao no nolazainy t@ toko voalohany t@ bokiny :
Lasa sarotra kokoa ny resaka fokom-pirenena ankehitriny nohon'ny teôlôjiana lany andro : notereny ao anatin'ny 6 000 taona monjan'ny krônôlôjia hebreo, araky ny namelabelaran'ny arseveka Ussher azy, ny tantaran'izao tontolo izao. Tsy vitan'ny nanohana ny hevitra hoe miavaka tanteraka @ zavamananaina hafa ny mpampianatra ara-pivavahana, fa nanizingizina koa izy ireo fa afaka manaisotra ny fahasamihafana ananan'ny olombelona tsirairay hatr@ fiterahany ny tontolo iainana sy ny fanabeazana
Izao hono no nolazain'ny filôzôfa agnôstika sady manam-pahaizana @ matematika sy haiaina molekiolary David Berlinski :
Tsy fepetra ampy ho an'ny tranga tahaky ny nazisme ny fotopisainan'i Darwin, fa kosa eritreretiko ho fepetra ilaina dia ilaina ilay izy.
Izany hoe tsy ny darwinistes rehetra no hivadika ho nazi, fa kosa tsy maintsy mino ny fotopisainan'i Darwin ny nazi.
60 000 000 ny olona maty nohon'i Hitler.
Itony indray misy candidat ho an'ny amboaran'ilay olona namono olona betsaka indrindra t@ tantaran'ny olombelona : Iosif Vissarionovich Djugashvili, fantatra kokoa @ anaran'i Joseph Staline.
I Vissarion dadany, izay mamolava, dia nahery setra be t@ "Soso" (anaram-bositr'i Iosif). Indray andro, notorahany mafy be t@ gorodona ilay zaza, hany ka nisy ra ny amaniny mandritry ny herinandro. Azo lazaina fa ny rainy no nampianatra azy hankahala olombelona.
Tsara feo be i Soso, sady tsara stila be rehefa mihira. Nihira t@ kôrala t@ fiangonany tany Gori, Géorgie, izay tananany, izy, ary karamaina matetika izy hihira @ fanambadiana, mitondra surplis, avy @ polipitra. Nafana fo t@ fivavahana mihitsy izy t@'izany, ka tsy maintsy miatrika lamesa foana.
Ny kôlejy teôlôjikan'i Tiflis tany Tbilissi izay nidirany dia toerana difotry ny jadona sy ny tsindrihazolena ataon'ny mpampianatra @ mpianatra. Mafy dia mafy ny sazy nampiharina any (tahaky ny mibata harona feno vato mandritry ny adin'indray rehefa mafana be ny andro ohatra), sady tena ratsy fitondran-tena ny ao. Azo lazaina fa nifanena teo daholo ny fitondran-tena ratsy helohin'ny finoana kristiana.
Nisy mpampianatra anankiray izay tena nankahala an'i Soso, nanasazy azy isaky ny misy tsy mety kely, sady tsy nanaja ny vie privée-ny fa nikarokaroka ny kitapony sy ny entany isaky ny afaka manao an'izay mba hitadiavana zavatra azo anamelohana sy anasaziana azy. Izy no azo lazaina fa nampianatra azy hanao tsinontsinona ny fihetseham-pon'ny olona sy ny vie privée-ny (@ alalan'ny pôlisy miafina).
Ny zavatra tokony fantatra koa dia mpanao combats de rue miaraka @ mpiara-mianatra @ izy t@'izany.
Tia mamaky boky izy. T@ 1890, t@'izy efa nianatra 3 taona mahery tany Tbilissi, namaky ny "The Origin of Species" dikanteny rosiana izy. Kanjo, indray andro, rehefa niresaka momba ny maha-tsi-rariny ny fisian'ny manankarena sy ny mahantra izy sy ny namany, nilaza t@ izy hoe :
Tsy hoe tsy rariny Andriamanitra, tsy tena misy Izy. Nofitahina isika. Raha nisy Andriamanitra, tokony nahatonga an'izao tontolo izao ho rariny kokoa. Misy boky indramiko anareo dia ho hitanareo...
Fotoana kely taorian'izay, nilaozany ny kôlejy teôlôjika (tsy namita fianarana) dia lasa jiolahin-tsambo, gangster (izy no nitarika ny fanafihana banky lehibe tany Eorôpa, hitadiavany vola ho an'ny revôlisiona hony), mpamono olona, kômisera t@ antoko komonista, ary mpitondra jadona tsy mahita ny mahasamihafa ny mamono olona maro be sy ny manala bozaka hono.
60 000 000 ny olona maty nohon'i Staline.
Itony indray i Mao Zedong :
Antony goavana nitarika ny revôlisiona komonista ny fotopisainan'i Darwin. Nihevitra an'i Darwin, araky ny nanoritsoritan'ny mpomba an'i Darwin any Alemaina azy, ho vontoatin'ny sôsialisma ara-tsiansa sinoa izy.
Ireto misy filazany sasany :
Raha tsy nanindry mandrakariva ny fantina natoraly dia lo teo ny olombelona.
Ny revôlisiona sy ny fiekena ny kilasy ary ny tolon'ny kilasy dia ilain'ny tantsaha sy ny vahoaka sinoa mba haharesy ny mpanohitra aty @ firenena sy avy any ivelany. Tsy tsotra, tsy madio ary tsy haingana io tolona io.
Izay no atao hoe darwinisme tsy misy fangaro, tsy misy fihetseham-po ary mahomby, tompokolahy sy tompokovavy !
80 000 000 ny olona maty nohon'i Mao, ary lazaina fa vonona ny hanao sorona sinoa 300 000 000 izy mba hahatafita ny revôlisiona.
Nehemiah - 13/05/2013 08:42
Nehemiah - 14/05/2013 08:13